Ingxabano Ngokulungiswa koBakhoboka
Iimpembelelo zentengiso ye - transatlantic yekhoboka kunye nekoloniyaliyali iyaqhubeka ibuyiselwa namhlanje, iholele ama-activists, amaqela oluntu amalungelo kunye nenzalo yabanamaxhoba ukuba bafune ukuhlaziywa. Ingxoxo malunga nokubuyiselwa kobukhoboka eUnited States ihlaziya izizukulwana, ngokwenene, yonke indlela eya kwiMfazwe Yomphakathi. Emva koko, u-Gen. William Tecumseh uSherman wacebisa ukuba bonke abakhululekileyo kufuneka bafumane iihektare ezingama-40 kunye ne-mule.
Le ngcamango yafika emva kwentetho kunye ne-Afrika yaseMelika ngokwazo. Nangona kunjalo, uMongameli Andrew Johnson kunye ne-US Congress abazange bavumelane nesicwangciso.
Ngekhulu lama-21, akukho nto ishintshile.
Urhulumente waseUnited States kunye nezinye iintlanga apho ubukhoboka obukhulile abukwanelanga ukuhlawulela inzala yabantu ebotshweni. Sekunjalo, ukubizwa koorhulumente ukuba bathathe isenzo sele kusanda kukhula. NgoSeptemba 2016, iphaneli yeZizwe eziManyeneyo yabhala ingxelo eyenza amaAfrika aseMelika afanele ahlaziywe ngokunyamezela iiklasi "zobuhlanga."
Ephakanyiswe ngamagqwetha omalungelo oluntu kunye nezinye iingcali, i-UN Working Group of Experts kubantu baseNtsundu yaseAfrika yabelana ngeziphumo zayo kunye ne-UN Human Rights Council.
"Ngokukodwa, ilifa lembali yekoloniyali, ubugqila, ukungalingani ngokobuhlanga nokuhlukana, ubundlobongela ngokobuhlanga kunye nokungalingani ngokobuhlanga eUnited States kuyinto engumngeni omkhulu, njengoko kungenakho ukuzibophelela kwangempela kwimbuyekezo kunye nenyaniso kunye nokuxolelana kubantu baseAfrika , "Ingxelo ichongiwe.
"Ukubulawa kwamapolisa kwanamhlanje kunye nokudandatheka kwabo bawenzayo kukukhumbuza ukugqithiswa kobuhlanga obudlulayo."
Iphaneli ayinalo igunya lokumisela iziphumo zalo, kodwa izigqibo zalo zibeka ubunzima kwimpamo yokubuyisela. Ngolu hlalutyo, fumana ingcamango engcono yeyiphi imbuyekezo, kutheni abalandeli bekholelwa ukuba bayadingeka kwaye kutheni abachasene nabo bafuna into.
Funda indlela amaziko abucala, afana neekholeji kunye namashishini, ayenayo indima yabo ebukhosini, njengokuba urhulumente wesigqeba uhlala ethule.
Xa abanye abantu beva igama elithi "impindiselo," bacinga ukuba ityholo yamakhoboka iya kufumana imali enkulu yokuhlawula imali. Nangona ukuhlaziywa kungasasazwa ngefom yekheshi, akuyiyo yodwa ifom apho ifika khona. Iqela le-UN lathi ukuhlaziywa kungafikelela "ukuxolisa ngokusemthethweni, amanyathelo ezempilo, amathuba emfundo ... ukulungiswa kwengqondo, ukuhanjiswa kwethekhnoloji nokuxhasa ngemali, kunye nokukhanselwa kwetyala."
Umbutho wamalungelo oluntu Ulungelelaniso uchaza ukulungiswa njengemigaqo emininzi yomthetho wamazwe ngamazwe "ngokubhekiselele kwimbopheleleko yeqela elingafanelekanga ukulungisa umonakalo owenziwe kwilungu elenzakele." Ngamanye amazwi, ilungu lecala limele lisebenze ukuphelisa iziphumo ukwenza okungendawo kunokwenzeka. Ngokwenza njalo, iqela lijolise ekubuyiseni imeko kwimeko yokuba yayiza kudlala ngayo kungekho nto eyenziwa kakubi. IJamani ibuyisele ukuhlengahlengiswa kwabantu baseNtshonalanga, kodwa ayikho indlela yokuhlawulela ubomi bezigidi ezizigidi zezigidi ezixhela amaYuda ngexesha lokubulala.
I-Redress ibonisa ukuba ngo-2005, i-UN General Assembly yamkela iMigaqo-siseko kunye neZikhokelo eziLungelo lokuLungisa nokuHlaliswa kwaBantu abaSebenzayo bokuShatshazwa kwamalungelo oluntu kunye noMthetho woLuntu. Le migaqo isebenza njengesikhokelo sokuba ukuhanjiswa kungasasazwa njani. Omnye unokujonga kwakhona kwimbali kwimimiselo.
Nangona inzala yabaseMelika base-Afrika abayizigqila ayifumananga ukubuyiswa, amaJapan aseJapan anyanzelekile kwiinkampu zokuvalelwa ngurhulumente wephondo ngexesha leMfazwe Yehlabathi II. UMthetho woLuntu woLuntu wase-1988 wavumela urhulumente waseUnited States ukuba ahlawule i-internally $ 20,000. Abantu abangaphezu kwama-82,000 abasindileyo bafumana ukubuyiswa. UMongameli uRonald Reagan waxolisa ngokusemthethweni kwiingaphakathi.
Abantu abaphikisana nokubuyiselwa kweentlobo zekhoboka bathi ama-Afrika aseMelika kunye nama-American American internees ahluke.
Ngoxa abantu abasinda kwi-internment besaphila ukuze bafumane ukubuyisela, abagqumkani abamnyama abayikho.
Abaxhasi kunye nabachasene noLungiso
Ummandla wase-Afrika waseMerika uquka ababini abachasi kunye nabaxhasi bembuyekezo. UTe-Neisi Coates, intatheli ye-Atlantic, uye wabonakala njengenye yezona zikhokelo ezikhokelayo zokulungisa abantu base-Afrika baseMelika. Ngo-2014, wabhala ingxabano ephosakeleyo ngenxa yokubuyiselwa okwakubambelela kwi-stardom yamazwe ngamazwe. UWalter Williams, uprofesa wezoqoqosho kwiYunivesithi yaseGeorge Mason, ungomnye wezitha ezikhokelayo zokubuyisela. La madoda mabini.
UWilliams uthi ukulungiswa akudingekile ngenxa yokuba uxolo lokuba abantu base-Afrika baseMelika baxhamle ebukhosini.
"Phantse yonke imali yaseMelika yaseMelika iphezulu ngenxa yokuzalwa e-United States kunanoma iliphi ilizwe e-Afrika," uWilliam watshela i-ABC News. "Abaninzi abamnyama baseMerika baphakathi."
Kodwa le ngxelo ibonisa ukuba abase-Afrika baseMerika banesiphakamileyo esiphakamileyo, ukungabikho kwemisebenzi kunye nokungalingani kwempilo kunamanye amaqela. Kwakhona kubonakala ukuba abo bamnyama banobuncwane obuncinci ngaphezu kwemhlophe, ukungafani okuye kwaqhubeka kwizizukulwana. Ukongezelela, uWilliam uyazilahla izikhwama zengqondo ezishiywe kubukhoboka kunye nokucwasa ngokobuhlanga , abaphandi abaye baxhomekeka kwizinga eliphezulu eziphezulu zengozi yokugonywa kwabantwana abamnyama kunabamhlophe.
Ukulungiswa kwemibono kukuthi ukulungiswa kungaphaya kweso sitshixo. URhulumente unako ukuhlawula ama-Afrika aseMerika ngokutyalomali ekufundiseni, ukuqeqesha kunye nokuxhotyiswa koqoqosho.
Kodwa uWilliams uthi uhulumeni wesigqeba sele sele utyalomle ii-trillions ukulwa nobuhlwempu.
"Sinezintlobo zeenkqubo ezizama ukujongana neengxaki zolucalulo," watsho. "IMelika ihambe ngendlela ende."
Ukholo, ngokuchaseneyo, uxela ukuba ukulungiswa kuyadingeka kuba emva kweMfazwe Yomphakathi, amaAfrika aseMerika akhuthazela ubugqila bobabini ngenxa yeebhanti zamatyala, izakhiwo zokuhlala zendlu, uJim Crow kunye nogonyamelo olusesikweni. Wacacisa uphando lwe-Associated Press malunga nendlela ubuhlanga bubangelwa ngayo abantu abamnyama ngokuchithwa kokulahlekelwa ngumhlaba wabo ukususela kwixesha le-antebellum.
"Uchungechunge lubhalwe ngamaxhoba angama-406 kunye namahektare angama-24 000 yomhlaba axabisekileyo kumawaka ezigidi zeedola," uCoates wachaza malunga nophando. "Ilizwe lithatyathwe ngeendlela ezisuka kwi-chicanery law to terrorism. 'Ezinye zelizwe ezithathwe kwiintsapho ezimnyama ziye zaba yiklabhu yelizwe eVirginia,' i-AP ichazwe, kunye 'neendawo zeoli kwi Mississippi' kunye 'nesiseko sokuqeqeshwa kwebhola eFlorida.' "
I-Coates iphinda icacise ukuba abo babephethe amafama abamnyama abaqeshwe ngumhlaba basebenze kaninzi babonakala bengenangqiqo kwaye benqabile ukunika abahlawuliweyo imali ebolekiweyo. Ukuqalisa, urhulumente wesigqeba walahla amaAfrika aseMerika ithuba lokuba bakhe ubutyebi ngabanikazi bezindlu ngenxa yezenzo zobuhlanga.
" Ukuhlengahlengiswa kudlulele ngaphaya kweemali-mboleko ezixhaswa yi-FHA kwaye kwasasazeka kwishishini lonke lokubambisa imali, elalivele iqhelana nobuhlanga, ngaphandle kwabantu abamnyama kwiindlela ezininzi ezisemthethweni zokufumana umboleko," kusho uCoates.
Uninzi kunene, uCoates ubona indlela abamnyama abagqila kunye nabakhoboka abacinga ngayo ukulungiswa okuyimfuneko. Uchaza indlela ngo-1783, umfazi okhululekileyo uBelinda Royall waphendule ngempumelelo i-commonwealth yaseMassachusetts ngokubuyisela. Ukongeza, iiQuaker zafuna abaguquleli abatsha ukuba benze ukubuyisela kumakhoboka, kunye no-Thomas Jefferson okhuselekileyo u-Edward Coles banikezela ngamakhoboka akhe umhlaba emva kokuba bazuze. Ngokufanayo, umzala kaJefferson uJohn Randolph wabhala ngentando yakhe ukuba amakhoboka akhe akhulileyo akhululwe aze anikwe iihektare ezili-10 zomhlaba.
Ukuhlaziywa kwabamnyama kwamukelwa emva kokubekwa ngokuthelekiswa nokuba buninzi eMzantsi, kwaye ngokunyaniseka kwe-United States, kuxhamla ekuthengiseni abantu. Ngokutsho kweCoates, inxalenye yesithathu yemali engenayo emhlophe kwi-cotton eyisixhenxe ichazwe ebukhoboka. Ikhokothi yaba enye yezona zizwe eziphambili zelizwe, kwaye ngo-1860, ii-million ngeendoda ezibizwa ngokuba yi-Mississippi Valley ekhaya kunanoma yimuphi ummandla wesizwe.
Ngelixa iCoates i-America ehambelana kakhulu neentshukumo zokubuyisela namhlanje, ngokuqinisekileyo akazange aqalise. Ngekhulu lama-20, i-hodgepodge yama-Amerika asekela ukubuyiswa. Baquka u-Walter R. Vaughan owayengumntu omnyama, u-Audley Moore, umlindi wolungelo lobambiswano uJames Forman kunye nomlindi wamnyama uCallie House. Ngowe-1987, iqela leSizwe loBumbano lwaBamnyama lokulungiswa eMelika lwakhiwa. Kwaye ukususela ngo-1989, u-John John Conyers (uD-Mich.) Uye wazisa ngokuphindaphindiweyo ibhaso-mali, i-HR 40, eyaziwa njengeKhomishoni yokuFunda nokuphuhlisa iziphakamiso zoLungiso kuMthetho wase-Afrika waseMelika. Kodwa inyulo-mali ayizange ifake iNtlu, njengokuba njengoNjingalwazi weSikolo sikaHarvard Law, uCharles J. Ogletree Jr, akazange aphumelele nayiphi na imbuyekezo yeemali ezifunyanwa enkundleni.
Aetna, Lehman Brothers, JP Morgan Chase, FleetBoston zezeMali kunye noBrown & Williamson Ugwayi ziphakathi kweenkampani eziye zatshutshiswa ngenxa yobudlelwane babo ebukhoboka. Kodwa uWalter Williams uthe iimbutho azikholwanga.
"Ngaba iinkampani zinoxanduva loluntu?" UWilliam wabuza kwikholam yeembono. "Ewe. UNjalton Friedman uprofesa wongcwangulo wokubambisa u-Milton Friedman wachaza okokuqala ngo-1970 xa wathi kwintlalo yamahhala 'yinto eyodwa kunye noxanduva olulodwa loluntu kwintengiso-ukusebenzisa izibonelelo zalo nokuzibandakanya kwimisebenzi eyenzelwe ukwandisa inzuzo yayo ngelixa lihlala ngaphakathi imigaqo yomdlalo, oko kukuthi, usebenza ngokukhuphisana okuvulekileyo nakakhululekile ngaphandle kokukhohlisa okanye ukukhwabanisa. '"
Ezinye iinkampani zithatha ezahlukeneyo.
Njani amaZiko anokongezwa koBakhoboka
Iinkampani ezifana ne-Aetna ziye zavuma ukufumana inzuzo ebukhosini. Ngo-2000, inkampani icela uxanduva lokubuyiselwa iimbopheleleko zezemali ezilahlekileyo ezenzekayo xa i-chattel, amadoda kunye nabasetyhini abagqilaziwe, befa.
"U-Aetna uye wavuma ukuba emva kweminyaka emininzi emva kokusungulwa kwawo ngo-1853 ukuba inkampani inokuthi iqiniseke ubomi bekhoboka," kuchazwe inkampani. "Sibonisa ukuzisola ngokugqithiseleyo nayiphi na inxaxheba kuyo yonke into embi."
U-Aetna wavuma ukubhalela kwimigaqo emibini eqinisekisa ubomi bekhoboka. Kodwa uthe akuyi kubuyiselwa.
Icandelo le-inshurensi kunye nobukhoboka bebanjwe kakhulu. Emva kokuba i-Aetna ixolise ngenxa yendima yayo kwiziko, i-Legislature yase-California State ifuna zonke iinkampani ze-inshorensi zenza ishishini apho zifuna uphando lwaloovimba beemigaqo-mboleko ezibuyisela abathengi. Kungekudala emva koko, iinkampani ezisibhozo zanikezela ezo rekhodi, zithumela iirekhodi ezintathu zokufumana iinqanawa zekhoboka. Ngomnyaka ka-1781, ama-slavers kwinqanawa uZong waphonsa ama-slave angaphezu kwezi-130 ezigulane ezigulayo ukuze bafumane imali yomshuwalense.
Kodwa uTom Baker, umlawuli we-Inthanethi Law Centre kwiYunivesithi yaseConnecticut School of Law, watshela i-New York Times ngo-2002 ukuba akavumelani nokuba iinkampani ze-inshorensi zifanele zigwetywe ngobukhoboka babo.
"Ndicinga nje ukuba akukho nto ichanekileyo ukuba iinkampani ezimbalwa ziye zachongwa xa uqoqosho lwekhoboka luseyinto into yokuba uluntu lonke lujongene nalo msebenzi," watsho. "Inkxalabo yam kukuba ngakumbi ukuba kunomthwalo othile wokuziphatha, akufanele kujoliswe kubantu abambalwa."
Amanye amaziko anxulumene neentengiso zekhoboka azame ukwenza izilungiso kwixesha lawo elidlulileyo. Inani leyunivesithi ezindala kunazo zonke zesizwe, phakathi kwabo nguPrinceton, Brown, Harvard, Columbia, Yale, Dartmouth, iYunivesithi yasePennsylvania kunye neKholeji likaWilliam noMary, babenemibutho yobukhoboka. IKomiti yeYunivesithi yaseBrown yoBulungisa kunye noBulungisa yabona ukuba abasunguli besikolo, abazalwana baseBrown, babekhoboka kunye nabathathi-nxaxheba kwintengiso yekhoboka. Ukongezelela, amalungu angama-30 eBhodi ebusayo anamakhoboka okanye iinqanawa ezikhokeleyo. Ekuphenduleni kwesi sifundo, uBrown uthe iya kwandisa inkqubo yayo yokufunda i-Afrika, uqhubeke nokubonelela ngoncedo lwezobugcisa kwiikholeji zamnyama nakwiiyunivesithi, inkxaso yezikolo zikarhulumente zasemakhaya kunye nokunye.
IYunivesithi yakwaGeorgetown ithatha inyathelo. Amakhoboka aseyunivesithi kunye nezicwangciso zokuvakalisa ukuhlaziywa. Ngowe-1838, iyunivesiti yathengisa abantu abangama-272 abagqila abakhoboka ukuba baqede ityala labo. Ngenxa yoko, kunika ukunyulwa kwamkelwa kwintsimi yalabo bathengiswayo.
"Ukuba nalolu thuba kuya kumangalisa kodwa ndivakalelwa kukuba ndinetyala kum kunye nakwintsapho yam kunye nabanye abafuna ithuba," uElbert Thomas, inzala yenceku, watshela i-NPR ngo-2017.
Unina, uSandra Thomas, uthe wayengacingi ukuba isicwangciso sokubuyisela iGeorgetown sifike ngokukhawuleza, kungekhona yonke inzala isesikhundleni sokuya eyunivesithi.
Wathini na? "Wabuza. "Andifuni ukuya esikolweni. Ndiyindoda endala. Kuthekani ukuba awunayo amandla? Unomfundi onenhlanhla ngokwaneleyo ukuba ube nenkqubo yokuxhasa intsapho efanelekileyo, ube nesiseko. Unako ukuya eGeorgetown kwaye unako ukukhula. Unalo mbono. Unayo le ngane apha. Akasoze aye eGeorgetown okanye nayiphi na isikolo kule planethi ngaphaya kwezinga elithile. Ngoku, uya kwenza ntoni kuye? Ngaba ookhokho bakhe babandezeleka ngaphantsi? Hayi."
UTomas uphakamisa iphuzu apho abalandeli kunye nabandezeli bokuzibuyisela banokuvumelana. Akukho mali yokubuyisela inokubangela ukuphathwa kakubi.
2016 Corvette Z06: Iinkcukacha zentsebenzo kunye neCac Specs
I-Cancer Sun kunye neMpawu zeNyanga
Ukufundisa iinombolo kwi-ESL Beginners